Hanomboka mialohan’ny faran’ity taona ity ihany koa, hoy ity farany ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’i Tolagnaro sy Ambovombe ary hipaka hatrany Ihosy izany.
Hatao laharam-pahamehana ihany koa ny fametrahana ireo "cantines scolaires" amin’ny sekolim-panjakana isaky ny distrika. 342 ny isan'izy ireo ka isan'ny hisitraka izany ireo CEG miisa 33 sy lycée 5 ao Ambovombe.
Tetsy ankilany ny Raiamandreny sady filoha lefitry ny CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy) Latimer Rangers dia nangataka ny hamotsorana ireo mpiray tanindrazana noho ny disadisa tamin’ny fanombohana ireo tetikasa sasany ka nanambara ampahibemaso ny filoha Rajoelina fa mamela heloka azy ireny, ary nanome toromarika ny minisitry ny Fitsarana amin’ny fanatanterahana izany.
Mifanindran-dalana amin'izao fitsidihana izao ny asa fananganana ny CRNM na ny ivon-toerana fanarenana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ao Ambovombe. Hisy fizarana sakafo mandavan-taona eto aorian'ny fahavitan’ity ivon-toerana ity.
Fisantarana izany dia mponina miisa 400 no nizarana hanimasaka omaly, ary mponina miisa 1 000 hafa ihany koa no hotolorana sakafo mba ho vatsin'izy ireo.
Vita soa aman-tsara ny lalana rarivato ao an-tampontananan'Ambovombe. Vita ary notokanana ny CSB 2 Maroalomainty, toy izany koa ny fametrahana ireo Tantsaha misitraka ny tetik'asa « Titre vert » ao Anarafaly ho fanatsarana ny fihariana.
Nijery ifotony ny tetikasa fitazomana ny dogom-pasika tsy kaohin'ny rivotra ihany koa ny filoha.
Nitondra teny fisaorana tamin’ny anaran’ny vahoakan’Androy, ny amin’ireo foto-drafitrasam-pampandrosoana sy ny andalam-panatanterahana handresena ny kere ny depiote voafidy tao an-toerana, sady Kestora Henri Jean-Michel, niatrika izany ihany koa ny depiote Milavonjy Philobert.